Falanqeyn: IGAD oo Mashruuc siyaasadeed ka dhigtey Qaxootiga Soomaalida | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Falanqeyn: IGAD oo Mashruuc siyaasadeed ka dhigtey Qaxootiga Soomaalida
Falanqeyn: IGAD oo Mashruuc siyaasadeed ka dhigtey Qaxootiga Soomaalida
Ajandaha Shirkaan ayaa wuxuu yahay mid ku saabsan qaxootiga Somaliyed ee ku nool dalalka ku bahoobay Urur Goboledka IGAD, waxaana ka qayb galaya Madaxweyna yaasha IGAD Qaarkood.
Sidaan la wada socono Somali badan oo qaxooti ah ayaa ku nool qaar ka mid ah dalalka ku bohoobay magaca IGAD,
Qaxootigaasi Somaliyed, waxaa haysata xaalad kala duwan oo dhanka nolosha ah arinka ugu wayn ayaa ah iyagoo aanan haysan wax waraaqo aqoonsi ah oo cadeynaya inay yihiin Qaxooti sax ah ama aqoonsi cadeynaya ina yihiin soomaali sax ah.
Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo kamid ahaa madaxdii shirkaas ka qeyb galay
ayaa wuxuu halkaa ka jeediyey khudbad dheer
oo inteeda badan uu kaga hadlay u mahad celinta ururka IGAD doorka nabadeynta ee ay ka qaateen Soomaaliya.
Waxaa kale oo uu khudbadiisa ku soo qaatey xaaladaha abaaraha ee dalka kajirta iyo sida ay muhiim u tahay in Dawladiisa laga caawiyo dib u dhiska hey’adadeeda dowliga ah.
Waxaa wanaagsanayd in uu khudbadiisa si toos ah ugu sheego in aanay waqtiga Suurta gal ahayn in Qaxooti waqti dheer daganaa wadanka kenya iyo wadamada la midka ah iyo kuwa Yurub maraykanka in aan soomaaliya lagu celin karin.
Taas oo uu sabab uga dhigayoin marka hore Dawlada uu hogaaminayo in ku guulay sato inay xal u hesho dadka ku Barakacay Gudaha soomaaliya ee gaaraya 1milyan.
Madaxweyne Farmaajo aad ayuu uga Gaabsadey in uu ka hor yimaado siyaasada soo celinta Qaxootiga soomaalida ee ku nool wadanka kenya. ee shirkan IGAD markii ugu horaysay looga hadlay .
27sano waa waqti dheer dadka soomaaliyeed ee Qaxootiga ku ahaa wadamada dariska sida itoobiya iyo kenya in la yiraahdo waa la soo celinayaa Gaar ahaan kuwa ku nool wadanka kenya. Waqtiga dheer
Waxaa wax la yaabo ah Dawlada Kenya ayaa sheegtay in ay albaabada u laabayso xerada qaxootiga ugu wayn dunida ee Dhadhaab meesha lagu gaaro bisha afraad ee sanadkan,2017 waxayna bilawday qorshe uu qaxootigu iskii dib ugu laabanayo Soomaaliya.
Maxay tahay siyaasada ka dan baysa arinkan
Aduunyada aan ku nool nahay waxaa ka jira ururo iyo dawlado difaaca Dadka Qaxootiga ah
Aduunku waa iska indha tirayaa xaqiiqda saxda ah.
Dadka soomaaliyeed ee waqtidheer ku noola
Xeryaha Qaxootiga ee kenya In la yiraah si fudud waa la idin celinayaa iyadoo lawada og yahay dhibaatada soomaaliya ka jirta Arinkan waa wax ku cusub caalamka waxa ay wado dawlada kenya.
wayna iska cadahay in siyaasad ay ka dan bayso. Waqti dhaw ayaa la ogaan ujeeda ka danbeysa. ee Dawlada kenya wadato.
Sida la wada og yahay in ka badan 2 milyan
oo Soomaali ah ayaa ku barakacsan gudaha dalalka Geeska Africa.
Waxaa kaloo jira 1milyan oo barakacayaal ah oo ku sugan gudaha soomaaliya arinka waxaa sheegay hay’adda Qaramaa Midoobay u qaabilsan Qaxootiga. UNHCR
Waxaa kaloo dhibaate kale ah Tahriibka.
Rajo xumida soo wajahday Soomaalida ku jirta xeryaha qaxootiga waqtiga dheer arikan waxay qasabtey tahriib dhib badan oo dhul dheer loo aado si nolol ka duwan tan ay ku jiraan ay u helaan,
Waxaa Falanqey tayda ku soo Gabo gabeenayaa waa in dadka soomaalidu ku heshiiyaan inay iyaga ku xiran tahay xalka ugu fudud ee looga bixi karo dhibaatada Qaxootiga iyo abaaraha colaada.
Shirkasta oo ka qabto oo looga hadlo arimaha somaliya waa mid lagu liidayo shacabka soomaalida.
Previous articleMadaxda Dowladaha IGAD oo Ku Heshiiyay in Si Wadajir ah Xal Waara Loogu Helo Qaxootiga Soomaaliyeed-Sawirro
Next articleWarbixin: Dawladnimadu waa Heshiis Bulsho ee mooshinku muxuu yahay?